3 Walaalo ah oo dgowr Saacad gudahood lagu dilay Dalka Mareykanka | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii 3 Walaalo ah oo dgowr Saacad gudahood lagu dilay Dalka Mareykanka
Wiil Soomaali ah ayaa la sheegay inuu xalay ku dilay labo wiil oo walaalihiis ka yar ahaa magaalada Kansas City gobolka Missouri ee dalka Maraykanka.
Hanad C/casiis oo 20 jir ahaa ayaa la sheegay inuu rasaas ku furay si bareer ah walaalihiis ka yar-yar oo xaafidul Quraan ahaa kuwaasoo la kala oran jiray C/waaxid oo 16 jir ahaa iyo C/raxmaan oo 14 jir ahaa.
C/waaxid C/casiis oo 16 jir ahaa
Wiilasha walaalaha ah ayaa lagu dilay agagaarka gurigooda, xili ay ka soo laabteen masjidka Al-Taqwa ee Magaalada Kansas City oo ay Jameecada salaada taraawiixda ka tujin jireen sida uu sheegay Imaamka masjidkaas Shiikh Mustafa.
Booliska Maraykanka oo daqiiqado ka dib goobta soo gaaray ayaa muddo saacado ah eryanayey wiilka dilka geystay oo baxsad ahaa, waxaana dhexmartay israsaaseyn ugu dambeyn sababtay dhimashada Hanad iyo dhaawaca askari boolis ah sida ay sheegtay warbaahinta Maraykanka.
C/raxmaan C/casiis oo 14 ahaa
Weli si fiican uma cadda sababta Wiilkan uu u dilay Walaalihiis, balse wararka qaar ayaa sheegaya inuu ahaa nin daroogada isticmaala oo marar badan aflagaadeeyey diinta Islaamka.
Wiilashan hooyadood iyo aabahood ayaa la sheegay in siyaabo kala duwan loogu dilay Maraykanka 10kii sano ee la soo dhaafay, waxaana gacanta ku heysay eedadood oo haatan iyana weysay sadexdoodiiba.
Dhacdadan ayaa waxay naxdin iyo uurkutaalo ku noqotay Soomaalida ku nool Maraykanka oo si weyn uga xumaaday musiibada lama filaanka ah ee saacado yar gudahood galaafatay nolosha sadexdan wiil ee walaalaha ah.
Previous articleTalo ku socoto Ra iisal wasaraha xilgaarsiinta Rooble
Next articleJubbaland oo sheegay in Farmaajo uusan weli wareejin mas’uuliyadii amiga, balan qaadkiisii shalay ku tilmaamay marin habaabin.
Gobolka Texas ayaa noqday gobolka ugu weyn gobollada Mareykanka ee ilaa iyo hadda qaaday amarki dadka farayay in ay xirtaan maaska ama marada afka...
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Israel oo sheegtay in safiirka Imaaraatka...
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Gaashaandhigga oo ka hadlay howlgalada ka dhan ah...
Maamulka Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug oo ka hadlay Weerarkii...
Ciidanka Amisom ee Burundi oo dhameystirey dayactirka dhabaha diyaaradaha ee garoonka...